एसियाको उदय- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार २६, २०७६ रमेश के.सी.
काठमाडौँ — सीएनएनका फरिद जकारियाको कार्यक्रम जीपीएसमा बोल्दै बेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले एक्काइसौं शताब्दीको मध्यमा विश्वमा अमेरिका, युरोप, चीन र भारत चार शक्तिहरू सक्रिय रहने बताएका थिए ।
साँच्चै, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका रणनीतिकारहरू भन्छन्— वर्तमानमा अमेरिका आफ्नो नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व र बहुध्र्रुवीय एसिया चाहन्छ । चीनलाई विश्व बहुध्रुवीय र एसियामा आफ्नो नेतृत्व चाहिएको छ । भारत भने बहुध्रुवीय विश्व र बहुध्रुवीय एसियाको पक्षमा छ ।
वर्तमान विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको क्षय र चीनको उदय महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ । विगत बीस वर्षमा जति पनि किताब लेखिए, प्रायः चीनको उदयलाई लिएर लेखिए । तर, विदेश मामिलामा कम उमेरमा धेरै विज्ञता हासिल गरेकाले ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले ‘ह्वीज किड’ भनेका पराग खन्नाको नयाँ किताब ‘द फ्युचर इज एसियन : ग्लोबल अर्डर इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ ले भने एसियाकै उदय भइरहेको प्रमाणित गरेको छ । उनका अनुसार ६ सय वर्षपछि एसियाले आफूलाई पुनः आविष्कार गरिरहेको छ ।
यो पुनराविष्कारमा चीनको उदय प्रमुख घटना भए पनि चीन मात्रै होइन सम्पूर्ण एसियाको उदय भएको उनको ठम्याइ छ । सोह्रौं शताब्दीमा, जतिखेर युरोप मध्ययुगमा थियो त्यति बेला चीन विश्वकै सम्पन्न र विकसित राष्ट्र थियो । चीन आफूलाई ब्रह्माण्डकै मध्य अधिराज्य ठान्थ्यो । तर पछि औद्योगिक क्रान्तिको जन्मसँगै युरोपको, विशेष गरी बेलायतको उदय भयो । उनीहरूले विश्वलाई उपनिवेश बनाए । उन्नाइसौं शताब्दी युरोपको थियो भने बीसौं शताब्दी अमेरिकाको ।
अब एक्काइसौं शताब्दी सम्पूर्ण एसियाको हुनेछ । खन्नाले अहिले एसिया अर्डर अर्थात् व्यवस्था बन्न थालेको बताएका छन् । एसियामा उनले पश्चिम एसियाको इजरायल र अरब राष्ट्रदेखि मध्य एसिया हुँदै दक्षिणपूर्व र उत्तर एसिया हुँदै न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियासम्मलाई सामेल गरेका छन् ।
उनका अनुसार, एसियाको आर्थिक वृद्धिको इतिहास जापानबाट सुरु भएर त्यसलाई पछि सिंगापुर, ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरियाले अनुसरण गरेका हुन् । यही सम्भावित चमत्कार देखेर देङ स्याओ पिङले चीनमा सन् १९७८ मा आर्थिक उदारीकरणको सुरुआत गरे । त्यही चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।
बृहत्तर एसियामा करिब ५ अर्बको जनसंख्या छ भने त्यसमा चीनको मात्रै १.५ अर्ब छ । भारतमा १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ । पूर्वी र पश्चिम एसियामा मुसलमानहरूको बाहुल्य छ । यसर्थ चीनको मात्र होइन कि, सम्पूर्ण एसियाको उदयले विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउनेछ । एसियामा चीन, जापान र भारत ठूला शक्तिराष्ट्र बन्नेछन् ।
पश्चिम एसियामा साउदी अरेबिया र टर्की शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुनेछन् । युरोपेली राष्ट्रहरूको उपनिवेश, शीतयुद्धकालीन दुईध्रुवीय विश्वको तनावबाट गुज्रिसकेको एसिया अहिले आत्मनिर्भर बनिरहेको छ । यसले राष्ट्रहरूबीच एसियाकरण गरिरहेको छ । अहिले एसियाली राष्ट्रहरू बाह्य राष्ट्रभन्दा आफूबीच व्यापार गरिरहेका छन् अनि यो क्षेत्र जनसंख्या, प्राकृतिक साधनस्रोत, सैनिक र आर्थिक हिसाबले पश्चिमभन्दा ठूलो छ । यसलाई पराग खन्नाले एसियाको फिर्ती पनि भनेका छन् ।
चीनले सन् २०१२ मा प्राचीन सिल्क रोडलाई आधुनिक सन्दर्भमा सार्थक बनाउन सुरु गरेको बीआरआई एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो कथा बनेको छ । यहीँबाट विश्वमा बहुध्रुवीयताको बीजारोपण भएको हो । चीनसँगै दक्षिणपूर्वी एसिया आर्थिक वृद्धिका क्रममा छ भने भारतले वृद्धिमा उछिनेको छ । केही छोटो समयपश्चात् भारतको जनसंख्या चीनको
भन्दा बढी हुनेछ ।
करिब ७ सय वर्षपहिले मंगोल सम्राज्यका बेला एसियाको भूगोल एउटै थियो । उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेलीहरूले शासन गरेको एसियालाई बीसौं शताब्दीमा अमेरिकीहरूले अमेरिकीकरण गरे । ३० वर्षयता एसियाकरण सुरु भैसकेको पराग खन्नाको दाबी छ । एसियाको उदयले विश्वमा कोही पनि एक नम्बर नरहने उनको निचोड छ । उनको आकलन अनुसार, चीन र अमेरिका दुईध्रुवीय हुन्छन् । जापान तेस्रो शक्ति बन्छ भने रुस चौथो र भारत पाँचौं ।
अमेरिका अहिले प्रशान्त क्षेत्रको मात्रै शक्ति हो । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र आसियानसँग चीनको व्यापार अमेरिकाको भन्दा ठूलो छ । एसियाली राष्ट्रहरूबीच व्यापार, कूटनीति र सांस्कृतिक आदानप्रदान तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।
एसिया द्वन्द्वमुक्त भने छैन । इजराइल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, उत्तर कोरियाको आणविक समस्या, भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व, पूर्वी चीन समुद्रमा चीन–जापान तनाव आदिले एसिया तत्काल संकटमुक्त हुने सम्भावना पनि छैन । भविष्यमा भने यस्तै अवस्था नरहन सक्छ । एसियामै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भारत, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता प्रमुख प्रजातन्त्रहरू क्रियाशील रहनेछन् ।
कजाकस्तानले युरोप र एसियाबीच पुलको काम गर्नेछ । भारत हिन्द महासागरमा सामुद्रिक शक्ति रहनेछ । यसैले एक्लो चीनको उदयले मात्रै एसियाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । एसियाको परिभाषा युरोपेलीहरूले तयार पारिदिए । अमेरिकीहरूले शीत युद्धका बेला भू–राजनीति गरे तर अब एसियालीहरू आफ्नो कथा आफै लेखिरहेका छन् ।
एक थरी रणनीतिकारहरू भन्छन्— चीनको उदयले उसको अमेरिकासँग युद्ध पनि हुन सक्छ । अहिले चीन र अमेरिकाबीच व्यापार र प्रविधि युद्ध चलिरहेको छ । एउटा स्थापित महाशक्तिबाट अर्को उदाउँदो शक्तिले सत्ता हत्याउन खोज्दा यस्ता सोह्र संक्रमणका क्रममा ५ सय वर्षयता बाह्र वटा शक्ति संक्रमण युद्धमा परिणत भएका छन् ।
एसियाको उदय भनेको विगत ४ सय वर्षमा यहुदी र इसाई परम्पराको विश्वमा भएको हालीमुहालीको पनि कटौती हो । एसिया विश्वका सबै प्रमुख धर्मको उत्पत्तिस्थल हो । भाषा, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली र इतिहासले विविधतायुक्त एसियाको हालैको स्मृतिमा व्यवस्थाको अवधारणा थिएन । तर, अब अर्डरको अवधारणा विकसित हुन थालेको छ , जसको सुरुआत बीआरआईसँग सुरु भएको हो ।
एसिया विश्वमा छाएको छ । अमेरिकामा एसियाली मूलका मानिसहरूको सफलताले पनि एसियालीहरूको क्षमता र कल्पनालाई देखाउँछ । एसियाबाट विश्वका अरू क्षेत्रका मानिसले पनि सिक्न सक्छन् । विश्वका वायुसेवाहरू अहिले एसियामा केन्द्रित छन् । ‘क्रेजी रिच एसियन’ जस्ता फिल्मले हलिउडमा स्थान पाएका छन् । योगले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आफ्नो दिन घोषणा गराएको छ । यसर्थ एसियाको व्यापक सांस्कृतिक विरासत विश्वव्यापी बन्दै गएको छ ।
सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन, सैन्य रूपमा हेर्दा एसियामा चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया जस्ता आणविक शक्ति हुन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य संख्या पनि एसियामै छ । पश्चिमी इतिहासकारहरूले एसियालाई रहस्यमय र रङ्गीन भूगोलका रूपमा चित्रित गर्दै आएका थिए । उपनिवेशको यो पूर्वीयवादले पश्चिमीहरूको पूर्वाग्रहलाई देखाउँछ । तर आज एसिया समृद्धि, वैज्ञानिक र यथार्थपरक धरातलमा उभिन खोजेको छ ।
एसिया अब ब्रान्ड बनेको छ ।
प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२०
के हो, चौथो औद्योगिक क्रान्ति ?
असार ७, २०७६ रमेश के.सी.
काठमाडौँ — रमेश के.सी.हिजो सत्य लागेका कुरा आज कम सत्य र असत्य लाग्न थालेको छ । सत्य पनि युगसापेक्ष हुँदोरहेछ । जीवन, जगत र प्रकृतिका ‘फेनोमेना’ बुझ्ने ज्ञान पनि अध्ययन र प्रयोगले फरक–फरक हुँदोरहेछ । आज त्यही नयाँ ज्ञानको उदय भइरहेको छ । यो उदाइरहेको ज्ञानको चरित्रलाई चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष कलाउस स्कवाबले उल्लेख गरेका छन् ।
यस क्रान्तिमाथि सन् २०१३ को फोरमको सम्मेलनमा अनेकौं सत्र सञ्चालन भए । विज्ञानमा भइरहेको यस क्रान्तिले हामी होमोसेपियनहरूको अहिलेसम्मको विश्वास प्रणाली, कार्यशैली र मस्तिष्कको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्दिनेछ । यसले पुरानो सभ्यतालाई मार्नेछ र नयाँ सभ्यताको जन्म गराउनेछ ।
सन् १९९० को दशकमा भविष्यशास्त्री एल्विन टफ्लरले सूचना क्रान्तिको दौरान नयाँ सभ्यता सिर्जना भइरहेको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार मानव सभ्यताका तीन लहर छन् । तीमध्ये पहिलो कृषि क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति र तेस्रो सूचना क्रान्ति थिए । सूचना क्रान्तिपछि अहिले जन्मिरहेको नयाँ क्रान्ति झन् खतरनाक र दूरगामी हुनेछ । ३० वर्षमा गान्धी र माओले मानव व्यवहारमा ल्याउन नसकेको क्रान्ति एप्पल कम्प्युटरका स्टीभ जब्स, माइक्रोफ्टका बिल गेट्स, फेस बुकका मार्क जुगर वर्ग, अमेजोनका जेफ बेजोज, गुगलका लेरी पेज र अलिबाबाका ज्याकमाहरूले ल्याए । आज संसारका हरेक कुना र मानिसलाई छोएको यस क्रान्तिले सुपर स्टेटजस्ता ‘टेक कम्पनी’हरूको जन्म गराएको छ । केही समय अघिसम्म क्रान्ति राजनीतिक र सामाजिक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यसले तोड्यो । विज्ञान सार्वभौम हुन्छ र यसले प्रकृति र मानवको फेनोमेना बुझ्छ । जसको प्रभावले करिब ३ अर्ब मानिसको डाटाको मालिक फेसबुक कम्पनी कुनै–कुनै राष्ट्रभन्दा बलियो देखिएको छ, सूचनाको मालिकको रूपमा । यस कम्प्युटर र सूचना क्रान्तिपछि न्युरोसाइन्स, क्वान्टम कम्प्युटर, बायोटेक, भर्चुअल र अगमेन्टेट रियालिलटज, स्पेस टेक्नोलोजी, ब्लक चेन र इन्टरनेट अफ थिङ्जले मानव समाजमा असाधारण परिवर्तन ल्याउनेछ । कृषि युग र औद्यौगिक युगका पहिलो र दोस्रो चरणमा बनेका मानव र समाजको परिभाषालाई बदल्नेछ । अब मानव सांस्कृतिक र सामाजिक प्राणीमात्र रहेन । उसको जीवनमा प्रविधि जोडिन आइपुग्यो । यस परिघटनालाई उत्तर–आधुनिकहरूले टेक्नो कल्चर भनेका थिए । आज बायोटेक र इन्फोटेकको सम्मिश्रणले सोच्दै नसोचेको परिवर्तनहरू ल्याउने कुरा इजरायली इतिहासकार युवाल नोहा हरारी बताउँछन् । मानिस स्नायु विज्ञान, जीव रसायन र विद्युतीय तरङ्गहरूको गठजोडबाट बनेको छ भन्ने मान्यता यस चौथो औद्योगिक क्रान्तिले राख्छ । त्यो गठजोडमाथि आविष्कार र प्रयोग गर्नाले मान्छेको क्षमता र स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । यस ‘नन अर्गानिक’ मानवलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका निक बोस्ट्रमले उत्तर–मानव भनेका छन् । अब उत्तर–मानवको जन्म हुनेछ । जसको समाजलाई उत्तर–मानव समाज भनिनेछ ।
पहिलो औद्योगिक क्रान्ति १८ औं शताब्दीको मध्यमा लुगा काट्ने मेसिनबाट भएको थियो । जसको प्रविधिले वाष्प इन्जिन र रेलको आविष्कार गरायो । सन् १८७० देखि १९५० सम्म नयाँ प्रविधि र क्रान्तिको जन्म गरायो । जसले रेडियो, टेलिभिजन, विद्युत, प्लेन, टेलिफोन र अटोमोबाइलहरूको जन्म गरायो । सन् १९५० बाट सूचना सिद्धान्त र डिजिटल कम्प्युटिङको आविष्कार गरायो । यो तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति थियो । जुन बिसौं शताब्दीमा भएको प्रमात्रा भौतिकीको आविष्कार र प्रयोगबाट सम्भव भएको थियो । अहिले भइरहेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति यसैको जगमा उभिएको छ । जसका भविष्यवाणी गुगलका भविष्यशास्त्री रे कर्ज बेल र न्युयोर्क सिटी विश्वविद्यालयका सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक मिचियो काकु गरिरहेका छन् । काकु ‘द फ्युचर अफ ह्युमानिटी’ पुस्तकमा कालान्तरमा पृथ्वी ग्रह मानवजातिको लागि बसोबास गर्न योग्य भएन वा वातावरणीय संकटले मानव अस्तित्व संकटमा पर्‍यो भने मंगलग्रहमा मानव बसोबास सम्भव छ भन्नेसम्म भविष्यवाणी गर्छन् । जसको संकेत आज सुरु भएको स्पेस पर्यटनले पनि दिएको छ ।
मान्छे यस क्रान्तिमा विभिन्न ग्रहको भ्रमण गर्न सक्छ । स्नायु विज्ञानको विकासले मानव चेतनालाई शरीरबाट निकालेर स्पेसमा घुमाउन सकिन्छ । यी यस्ता गुण हुन्, जुन चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा सम्भव हुन्छ । बायोटेकको विकासले मानिस कहिल्यै नमर्नेगरी अमरता प्राप्त गर्छ । यसले मृत्युलाई जित्छ । जसलाई क्रोयनिक्स भनिन्छ । शरीरका अङ्गहरू सबै कृत्रिम रूपमा बनाउन सकिन्छ । मस्तिष्कको कृत्रिम रूप उत्पादन हुन्छ । जिन एडिट गरेर भ्रूण अवस्थामै व्यक्तिको स्वभाव र क्षमतालाई निर्धारण गर्न सकिन्छ । मानव क्लोनिङ हुन्छ । थ्री डी प्रिन्टिङबाट आफूले चाहेको सामान बनाउन सकिन्छ । मानव जत्तिकै सोच्न सक्ने रोबर्टहरू हुन्छन् । उद्योग, अस्पताल र कार्यालयहरूमा रोबर्टले काम गर्नेछन् । जसले मानव श्रमलाई विस्थापन गर्नेछ । मानव मस्तिष्कसँग इन्टरनेट जोडिनेछ । लुगाजस्तो लगाउने टेक वस्त्रहरू आविष्कार हुनेछन् । जसबाट मानवले आफ्नो क्षमता विकास र प्रविधिमार्फत शरीरको क्षमताको खेलवाड गर्नेछ । यस क्रान्तिको सार के हो भने मानव मेसिन र जैविक रसायनहरूको गठजोड हो । जसलाई प्रविधिमार्फत जे पनि गर्न सकिन्छ । आज साइन्स फिक्सन फिल्ममा देखाएको कुरा भोलि यथार्थ बन्नेछ । जसको प्रहार आफै पनि कृषि युगमा बसिरहेका समुदायलाई पर्नेछ । पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति शैलीमा बाँचिरहेकाहरू पछौटे हुनेछन् । यसले स्मार्ट समाज र स्मार्ट मानवको अवधारण ल्याउनेछ । सबै कुरो सौर्य ऊर्जाबाट हुनेछ । जियो इन्जिनियरिङमा पनि उथल–पुथल ल्याउनेछ । यो कायाकल्पले केही नीतिगत र धार्मिक प्रश्न उठाउनेछ । के मानव मेसिन हो ? ईश्वरको भूमिका के त ? जस्ता प्रश्नले पिरोल्नेछ । हिजोको सभ्यतालाई ठाडो चुनौती दिने यसले ‘टेक’ विभेद पनि ल्याउनेछ ।
अहिले डिजिटल डिभाइडजस्तो यसले टेक डिभाइड पनि ल्याउनेछ । विश्वका विशेष गरेर पश्चिमका वैज्ञानिक र पुँजीपतिहरूद्वारा प्रचारित चौथो औद्योगिक क्रान्तिले विकासशील तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरू र पछौटे समुदायलाई सकसमा पार्नेछ । विज्ञान प्रविधि पनि शक्तिशालीहरूकै आर्थिक फाइदा र बलवान हुने महत्त्वकांक्षाको सेवा गर्ने हो भने आम समुदाय त्यसको लाभबाट वञ्चित हुनेछन् । ठूलठूला राष्ट्रहरू त्यस प्रतिस्पर्धामा आउनेछन् । चौथो औद्योगिक क्रान्तिले ‘टेक वार’ पनि ल्याउनेछ । अहिले यस विषयमा प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ । चीनको ५ जी प्रणालीको विस्तार गर्न चाहने हुबाबे कम्पनीमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध र गुगलको प्रविधि प्रयोग गर्न दिन अस्वीकार गर्ने कदमले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको महत्त्व देखाउँछ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका छन्– जसले ‘निर्मित बौद्धिकता’माथि पकड जमाउँछ, उही शक्तिशाली हुन्छ । यसर्थ चौथो औद्योगिक क्रान्ति राजनीतिक हिसाबले पनि जटिल प्रक्रिया हो ।
प्रकाशित : असार ७, २०७६ ०७:३९
पूजा पराजुली वाग्ले
अपडेटः शनिबार, ९ असोज, २०७७ । १४ : १० बजे